अनुसन्धानको निष्कर्ष: मादक पदार्थ सेवनले विदेशी भाषा राम्ररी बोल्न सहयोग गर्छ! :: PahiloPost
Jun 17, 2019 | २ असार २०७६
Jun 17, 2019 | २ असार २०७६ Search
अनुसन्धानको निष्कर्ष: मादक पदार्थ सेवनले विदेशी भाषा राम्ररी बोल्न सहयोग गर्छ!
23rd December 2018, 02:01 pm | ८ पुष २०७५
के तपाईलाई विदेशी भाषा बोल्न असहज महसुस भइरहेको छ?
एक अनसुन्धानले विदेशी भाषा बोल्न गाह्रो मान्ने व्यक्तिहरुले ठिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्दा उक्त भाषा राम्ररी बोल्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानमा निस्किएको निष्कर्ष अनुसार बियर वा एक ग्लास वाइनले डरलाई घटाउँछ। त्यस्तै मानिसमा देखिने चिन्ता वा संकोच पनि मादक पदार्थको कारण नै हट्छ।
यस्तै मादक पदार्थ सेवनबाट 'कग्निटिभ र मोटर' कार्यप्रणालीमा ह्रास ल्याउने र मान्छेको स्मृति र ध्यानमा नकारात्मक असर पार्ने पनि उनीहरुको तर्क छ। यसबाट मादक पदार्थ सेवन गरेकाहरु अत्याधिक आत्मविश्वासी बन्ने र आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य हुने देखिएको छ।
के मादक पदार्थ सेवन गरेपछि मानिसहरु विदेशी भाषा राम्ररी बोल्न सक्छन्?
जर्नल अफ साइकोफार्माकोलोजीमा डच र ब्रिटिस अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अनसुन्धान प्रतिवेदन हालै प्रकाशित भएको थियो। अनुसन्धानबाट कम मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्दा मानिसहरु राम्री विदेशी भाषा बोल्ने गरेको पाइएको छ।
जर्मनीसँग सीमा जोडिएको नेडरल्यान्डसस्थित मासट्रिसिट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ५० जर्मन भाषी उक्त अनुसन्धानमा सहभागी भएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरु सबैले कक्षाहरु डच भाषामा पढाइने भएकाले कहिलेकाँही मादक पदार्थ सेवा गर्ने गरेको बताए। हालै भएको परीक्षामा उनीहरुले भाषाका कारण राम्रो अंक ल्याएका थिए।
अनुसन्धानमा सहभागी सबैलाई डच भाषा बोल्ने विज्ञले दुई मिनेट अन्तर्वार्ता लिएका थिए। अन्तर्वार्ता लिनु अघि आधा विद्यार्थीहरुलाई पानी पिउन दिइएको थियो भने बाँकी आधालाई मादक पदार्थ सेवन गर्न दिइएको थियो। मान्छेको तौल अनुसार उनीहरुलाई मादक पदार्थ दिइएको थियो। १५० पाउन्डको व्यक्तिलाई एउटा बियरमात्र दिइएको थियो।
उनीहरुसँग गरिएको कुराकानीहरु रेकर्ड गरिएको थियो। अन्तर्वार्ता लिइरहेका दुई डच भाषीले सहभागीहरुले बोलेको आधारमा मूल्यांकन गरेका थिए तर कुन सहभागीले मादक पदार्थ सेवा गरेको छ भन्ने बारे उनीहरुलाई थाहा थिएन। सहभागी विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुले गरेको प्रदर्शन र बोलेको बारे आफैलाई मूल्याङ्क गर्नसमेत लगाइएको थियो।
मादक पदार्थ सेवनले सहभागीहरु आफैले गरेको मूल्यांकनलाई प्रभावित गरेन। मादक पदार्थ सेवन नगरेकाहरुले भन्दा गरेका सहभागीहरुमा आत्मविश्वासको कमी हुनुका साथै आफ्नो अन्तर्वार्ता प्रति सन्तुष्ट देखिएका थिए।
उनीहरुले बोलेको रेकर्डिङ सुनेकाहरुले भने सहभागीहरुले राम्रो प्रदर्शन गरेको बताएका थिए। अन्तर्वार्ता लिने डच भाषीहरुले पानी पिउने भन्दा मादक पदार्थ सेवन गरेका सहभागीहरुले राम्री डच बोलेको मूल्यांकन गरेका थिए। दुवै समूहका सहभागीहरुले व्याकरण, वादविवादमा समान अंक प्राप्त गरेका थिए।
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार सहभागीहरुलाई कम मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्न दिइएको तर यदि मात्रा धेरै भएको खण्डमा सकारात्मक असर ल्याउन नसक्ने बताए। प्रतिवेदनमा उनीहरुले मादक पदार्थ धेरै सेवन गर्दा भाषा राम्ररी बोल्न नसक्ने र अड्कने बताए।
अनुसन्धानमा सहभागी विद्यार्थीलाई आफूले के खाइरहेको छ भनेर थाहा भएकाले मादक पदार्थको प्रभावका कारण उनीहरुलाई आफ्नो भाषा सुध्रेकोबारे थाहा हुन नसक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्ष छ। भविष्यमा अनुसन्धान गर्दा मादक पदार्थको 'प्लेसेबो' अवस्था निर्धारण हुने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
यो अनुसन्धानबाट आएको निष्कर्ष जर्मन भाषा बोल्ने मानिस र डच सिकिरहेकाहरुका लागि अनौठो नहुने भन्दै यो अध्ययनलाई अरु समूहमा पनि लागू गरिनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको तर्क छ।
यो विधिलाई अरु अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुले पनि साथ दिएको छ। सन् १९७२ मा गरिएको एक अनुसन्धानमा थोरै मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्दा अमेरिकीहरुले राम्ररी थाई भाषा बोल्ने गरेको फेला परेको थियो।
यो अध्ययनले सहभागीहरुको मानसिक र भावनात्मक अवस्थाको अध्ययन गरेको थिएन। अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार थोरै मात्रामा मादक पदार्थ सेवनले सहभागीमा 'ल्याङग्वेज डिसअर्डर' घट्ने र राम्ररी बोल्न सक्ने भएका हुन्।
उनीहरुको निष्कर्ष छ 'कम मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्नले विदेशी भाषा बोल्ने मान्छेहरुले उक्त भाषा राम्ररी बोल्न सक्छन्।'
टाइममा प्रकाशित लेखको भवानुवाद।
अनुसन्धानको निष्कर्ष: मादक पदार्थ सेवनले विदेशी भाषा राम्ररी बोल्न सहयोग गर्छ! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
बाउन्सर गर्लको सोचलाई यू टर्न गराउने बिजुलीबजारको त्यो 'एक्सिडेन्ट'
'गलबन्दी' गीत प्रति शम्भु राई आक्रामक, नाम र दामको लडाई प्रतिष्ठानमै मिल्ला या अदालत पुग्ला?
टिपरको ठक्करबाट पत्रकारको मृत्यु, ब्याक गरेर किचेको प्रहरीको भनाइ
गुठी विधेयक जलाउँदै गजुरेलको आक्रोश : गणतन्त्रलाई खिसिटियुरी गर्ने प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंलाई अमेरिकीकरण गर्न खोजे
लोकसेवा विज्ञापन विवादः सर्वोच्चले बोलायो दुबै पक्षलाई, असार ३ गते निर्णय हुने
गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'
बेलायतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गोरखा सैनिकको सलामी
सत्तारुढ दलकै सांसद भन्छन् : अब सडक संघर्षको विकल्प छैन
गुठी नियन्त्रण गर्न खोज्दा बबुरा भएका थिए बाबुराम भट्टराई : इन्द्रजात्राको त्यो आन्दोलन जसले सत्ता हल्लायो, अहिले त्यसैको झल्को
प्रश्न, चोरी किन? उत्तर, श्रीमानको उपचार खर्च जुटाउन!
अनुसन्धान नसकी अपराधीको रुपमा प्रस्तुत गर्न प्रहरीलाई किन हतारो?
गुठी विधेयकविरुद्ध पाटनमा यसरी निस्कियो मसाल जुलुश, फोटोमा हेर्नुस्
गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि
Editor: Umesh Shrestha